Inkcazo yeCondha yeBuddhist Term Skandha
hIgama lesiSanskrit elithi skandha lithetha "inqwaba" okanye "ukuhlanganiswa" kwinguqulelo yaloqobo. (Ngolwimi lwe-Pali, ixesha elifaniswayo li- khandha .) Kwiingcamango zeBuddhist, umntu ungumdibaniso wezihlanu ezikhoyo, ezibizwa ngokuba yi- Five Skandhas. Zezi:
Ifom (ngamanye amaxesha eyaziwa ngokuthi "uwonke umba."
Uvakalelo kunye nesimo
Izikolo ezahlukahlukeneyo zeBuddhism zineenkqubela ezahlukeneyo ze-skandhas, kodwa uludwe olulandelayo lulushwankathela iziseko.
Ngokuqhelekileyo, i-skandha yokuqala yifomu lethu lomzimba, umcimbi wangempela owenziwe ngemizimba yangempela, ekhompyutheni yeBuddhist ibandakanya izinto ezine zokuqina, ukukhanya, ukushisa kunye nokunyakaza. Ngokwenene, oku kuhlanganiswa okwenza oko sikucingayo njengomzimba wenyama.
Okwesibini lenziwa yimvakalelo yethu yomzwelo neyomzimba, iimvakalelo zemiva ephuma ngaphandle koqhagamshelwano lwethu nezitho zengqondo zinehlabathi. Lezo zivakalelo / iimvakalelo ziintlobo ezintathu: ziyakonwabela kwaye zizonwabe, ziyakwazi ukungabi nantoni kwaye zinyanyekayo, okanye zingabandakanyeki.
I-skandha yesithathu, imbono, ithatha ininzi yale nto esiyibiza ngokuthi ukucinga- ukuqonda, ukuqonda, ukuqiqa. Kuquka ukuqonda kwengqondo okanye ukwahlula okwenzeka ngokukhawuleza emva kokuba iqumrhu lomzimba lidibanisa nento. Ingqiqo inokucingwa ngokuba "yinto echaza." Into ebonwayo ingaba yinto ebonakalayo okanye isifo sengqondo, njengengcamango.
I-skandha yesine, ukubunjwa kwengqondo, kubandakanya imikhwa, ubandlululo kunye neziganeko. Ukuthanda kwethu, okanye ukuthanda, kwinto inxalenye yesine ye-skandha, njengengqalelo, ukholo, unembeza, ukratshi, umnqweno, ukunyaniseka, kunye nezinye iimeko ezingqondweni, zombini ezintle kwaye zingenakulungile.
Imithetho yesibonakaliso nempumelelo, eyaziwayo njenge-karma, yilawommandla wesine se-skandha.
I-skandha yesihlanu, ukuqonda, ukuqonda okanye ukuvakalelwa kwinto, kodwa ngaphandle kokuqonda okanye isigwebo. Nangona kunjalo, kuyiphutha ukukholelwa ukuba i-skandha yesihlanu ikhona ngokuzimeleyo okanye ngandlela-thile iphezulu kunezinye i-skandhas. "Inqwaba" okanye "uhlanganiso" njengokuba abanye bekhona, kwaye yinyani nje, kungekhona injongo.
Xa zonke iintlangano zihlangene, uvakalelo lwalo okanye "I" lwenziwa. Oko kuthetha ntoni, ngokuchanekileyo, kuyahluka ngokuxhomekeke kwizikolo ezahlukeneyo zobuBuddha. Kwisiko seTheravedan, umzekelo, kucingelwa ukuba ukunamathela kwelinye okanye ngaphezulu kwe-skandhas kukukhokelela ekuhluphekeni. Ngokomzekelo, ukuhlala ubomi obunikwe ukuthanda kwekota yesine kuya kubonakala njengendlela yokubandezeleka, njengokuba ubomi obuza kuzinikezelwa kuphela ekuqhelweni kolwazi. Isiphelo sokubandezeleka kuba ngumcimbi wokulahla isinamathiselo kwi-skandhas. Kwizithethe zaseMahayan, oogqirha bakhokelwa ekuqondeni ukuba zonke i-skandhas ziyizinto ezingenanto kwaye zingenanto yokwenene, ngoko kukhulula umntu ekugqibeleni kubo.
Imifanekiso ibonisa indlela yokucoca i-Gar
Ikhishini likaThixo lokubaluleka ngexesha lomnyaka omtsha waseTshayina
Abaculi bePiano kunye neeMvumi
Ixesha le-Cambrian (i-542-488 yeMillion Years Ago)